August 2019 - Page 2 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Muqdisho-(Puntland Mirror) Idaacada ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in labo sargaal oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada kumaandooska oo ay weheliyaan saaxiibadooda beesha caalamka […]
August 24, 2019 Puntland Mirror 0
Garowe-(Puntland Mirror) Over the past days, there is disagreement between the Puntland President and his deputy. The disagreement emerged recently after President Said Abdullahi Deni appointed five members of the Puntland electoral commission, but vice […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maalmihii u dambeeyay waxaa jiray khilaaf u dhaxeeya madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa. Khilaafka ayaa dibada u soo baxay kadib markii dhawaan madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu soo magacaabay shan xubnood oo kamid […]
August 23, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamo katirsan maamulka Somaliland oo uu hoggaaminayo taliyihii aaga Badhan ayaa maanta oo Jimce ah isku soo dhiibay ciidamada Puntland, sida uu xaqiijiyay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani. Qoraal uu boggiisa rasmiga ah […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyeyaal cusub ayaa loo magacaabay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Magacaabida ayaa waxaa soo jeediyay wasaaraddaha difaaca, amniga, iyo cadaalada waxaana ansixiyay golaha wasiiradda oo […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa u hambalyeeyay Axmed Maxamed Islaam oo loo doortay madaxweynaha Jubbaland. “Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaca goleyaasha dowladda iyo shacabka waxa uu hambalyo u dirayaa […]
Somalia’s southern state of Jubaland extended its leader’s rule by four years in an election that will have repercussions extending beyond a region that’s at the forefront of a battle against al-Qaeda-linked militants. Mohamed Islam […]
August 21, 2019 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka maaliyada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in kharashkii daabacaada uu hortaaganyahay lacagta cusub ee dalka. Shir jaraaid oo uu Muqdisho ku qabtay maanta oo Arbaco ah, Cabdirixmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in […]
Garooowe-(Puntland Mirror) Isku dhac u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo deegaanka ku sugan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror. Isku […]